Lavender ubi na France | Akụkọ njem
Mariela Carril | | Francia, Ihe ị ga-ahụ
Mgbe oge okpomọkụ na-ada n'ebe ndịda France, akụkụ ụfọdụ nke ime obodo na-atụgharị lavender ma yinye ihe nkiri dị ebube. Nke ahụ bụ otú mara mma na lavender ubi na France!
Ihu igwe na-ekpo ọkụ karị, mbara igwe na-adịwanye elu, lavenders na-eto, na ikuku jupụtara n'ụdị ifuru pụrụ iche nke bụ. yiri okpomọkụ na Provence.
Lavender ubi na Provence
El okpomọkụ Ọ na-amalite n'etiti June wee kwụsị n'etiti August na ọ bụ n'oge a ka a na-agbanwe ubi nke Provence ka ọ bụrụ paradaịs a na-acha lavender.
Ọ bụ eziokwu na oge okpomọkụ na-abịa na Europe niile na France niile, ma ebe n'akụkụ ndị ọzọ nke mba ahụ, okooko osisi ọhịa, okooko osisi cherry ma ọ bụ sunflowers jupụtara na ya. e nwere akụkụ ụfọdụ nke Provence na-acha odo odo.
Ardeche Ọ dị na ndịda ọwụwa anyanwụ nke mba ahụ na ọ bụ mpaghara a maara nke ọma maka okporo ụzọ ya na oke ọhịa, o doro anya na oge okpomọkụ bụ oge pụrụ iche ịbịa leta ubi lavender na-ewu ewu. Enwere ọtụtụ mpaghara ịmara, mana n'ozuzu ya Ụzọ a tụrụ aro bụ ibido na Viviers, wee gafee Bourg Saint Andèol wee mechaa na Saint Remèze.. Ozugbo ebe a, na-ewerewo narị narị dị oké ọnụ ahịa foto, onye nwere ike ịga na obodo ngosi nka raara nye lavender, Domaine Lavandäis ma ọ bụ Musée de la Lavade.
Bonnieux bụ obere obodo dị na ngalaba Vaucluse, na Mpaghara Alps - Côte dÀzur. Ubi lavender ya na-eto na mbido Julaị ma na-achasi ike na agba. Ha nwere ike ọ gaghị adị oke ma ọ bụ ewu ewu dị ka ndị ọzọ, mana odida obodo Bonnieux, yana nke obodo Menerbes na Lacoste dị nso bụ ihe pụrụ iche. Ọ dabara nke ọma, ọ nwere ụlọ ọrụ ndị njem nlegharị anya mpaghara ka ha nwee ike iduzi gị na mpaghara ahụ.
El Chateau du Bois dị na mpaghara Luberon, ihe dịka 1100 mita nke elu ma na-enye ahụmịhe ugbo lavender zuru oke. Gịnị ka m pụtara? Ebe a dị ịtụnanya: ubi ndị ahụ dị n'ime obodo a na-akpọ Largade -d'Apt, nke a na-ewere na ọ bụ ya. ezi lavender growers. Ogo dị elu yiri ka ọ na-enye ha aka pụrụ iche na ọ bụ ezie na bulbs ndị ọzọ siri ike, a na-amata ha site n'inwe isi ísì.
Ee, naanị ị na-abịa ebe a na njegharị ahaziri ahazi, njọ, anyị amaraworị na ụdị njem ndị a na France dị nnọọ mfe. Ebe ebe a na-ewu ewu na mbido Julaị, a na m akwado itinye akwụkwọ n'oge.
drome ọ bụ ebe kacha mma maka ndị na-achọghị njegharị ụdị ọ bụla, mana ịga ije, see foto ma kwụsị iji nwee mmasị na lavender na ịnọ naanị ya. Enwere ọtụtụ ụzọ a ga-esi agafe na ụkwụ ma ọ bụ igwe. Drôme bụ ngalaba dị na mgbago ugwu Provence na ọ bụghị mpaghara njem nlegharị anya, yabụ na-atụ anya na ọ ga-abụ gị, ndị lavender na ndị ọzọ. Kedu ka ị ga-esi ruo ebe ahụ? Ọ bụrụ na ị nọ n'ụgbọ ala ọ bụ awa abụọ na ọkara site na Notre-Dame de Senanque, na Gordes.
Lavender ubi ha nọ n'ime obodo Valaurie, nke dị nso n'ubi vaịn Bordeaux, na oge kacha mma ị ga-eleta bụ n'isi ụtụtụ ma ọ bụ mgbe ehihie nke bụ mgbe agba dị mma na ísì ísì na-awakpo oghere.
Grasse bụ obodo ochie nke dị oké ọnụ ahịa ma mara dị ka isi obodo na-esi ísì ụtọ nke ụwa. Ee, o nwekwara ubi lavender nke dị n'ugwu nke obodo French Riviera mara mma. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-esi ísì ụtọ ebe a ma ị nwere ike ịga leta ha, mana n'oge ọkọchị, ị gaghị echefu ịgagharị n'ubi lavender mara mma.
Grasse dị n'etiti Nice na Cannes, yabụ ọ bụrụ na ị na-akwụsị na nke ọ bụla n'ime obodo abụọ a ị nwere ike ịme njem ma ọ bụ ụbọchị njem. N'elu anyị aha Notre-Dame de Senanque, nke dị na Luberon, ebe nke gafere lavender ya kwesịrị ịga leta n'ihi na o nwere ụlọ ụka mara mma.
Luberon dị n'etiti Provence ma dị Abbey sitere na ihe ọ bụla na-erughị narị afọ nke iri na abụọ. Ọ mara mma n'ezie na ọbụna karịa n'oge okpomọkụ mgbe ubi lavender na-esi ísì ụtọ gbara ya gburugburu. Ọ bụ kpọmkwem n'oge dị elu, site na July ruo August, na ọ jupụtara na ndị njem nleta, ya mere, dị ka anyị na-akwado mgbe niile, Chineke na-akwụghachi ndị na-ebili n'isi ụtụtụ. Karịsịa ma a bịa n'ịse foto na-enweghị ndị mmadụ!
Sault dị nso na Avignon na ọ bụ a maara nke ọma obodo n'ihi na ọ na-ahazi kwa afọ na Ememme Lavender. Sault bụ ugwu ebe a na-ekwu ubi lavender ya so na nke kacha mma na mba ahụ. Lee ka ugwu ndị ahụ si asacha odo odo! Mee izute na ụkwụ, ụgbọ ala ma ọ bụ igwe, ma ana m akwado igwe kwụ otu ebe n'ihi na ịgbachi nkịtị nke pedaling, ịdị jụụ na ịdị nro nke mmegharị ahụ mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè bụ ụlọ ọrụ kacha mma mgbe a ga-eji aka na-ebu ya site na mbara ala.
Ememme na Sault bụ n'etiti August. Ogige lavender French ọzọ dị Plateau d'Albion. N'ebe a, ọ dị mma ịnwe ụgbọ ala A na-agbasa ubi ndị ahụ n'elu ngalaba atọDròme, Alpes-de-Haute-Provence na Vaucluse. Na mpaghara a bụ kpọmkwem Sault.
Ha na-agbakwunye ụfọdụ 4500 hectare nke ubi lavender, ya mere, mgbe ị na-eji ụgbọ ala ma ọ bụ ọgba tum tum na-eme njem ọ dị mma, na-ahụ anya na na-esi ísì. N'ụzọ doro anya, Julaị bụ ọnwa kacha mma ịga na mgbe niile, na-amalite n'isi ụtụtụ. Foto ndị ị ga-ese! Enwere akụkụ ebe lavenders mix na ọka wit ya mere odo odo na-atụgharị ọla edo ...
Simiane La Rotonde ọ mara mma obodo dị na ngalaba Alpes-de-Haute-Provence, ndịda ọwụwa anyanwụ France. Ọ bụ n'obere ugwu na ubi lavender gbara obodo ahụ gburugburu ya mere n'oge okpomọkụ ọ bụ pearl nke agba na agba na-esi ísì ụtọ gbara ya gburugburu. Obodo n'onwe ya dị ntakịrị ma dị jụụ, udo, ebe mara mma ma ọ bụrụ na ị na-aga n'ebe ndịda nke mba ahụ n'ịdị elu nke okpomọkụ.
Ụlọ nsọ nke Saint Paul nwere ubi lavender nke ya, n'azụ ụlọ ochie. A na-ekwu banyere ya ka o si n'ike mmụọ nsọ Vincent van Gogh mgbe a kpọchiri ya ebe a, n'ihi na echiche ndị mara mma akwụsịghị iju ya anya. Ụlọ a bụbu ebe obibi ndị mọnk, ebe obibi ndị mọnk nke San Pablo, ma mesịa ghọọ ụlọ ọgwụ mgbaka nke bụ mgbe o nwere onye na-ese ihe dị ka ọbịa, laa azụ na May 1889.
Vincent Van Gogh kpọchiri onwe ya ebe a, mana ọ nọrọ naanị otu afọ. Agbanyeghị na ndụ nka ya nke a bụ afọ okike, na mgbe ị na-ahụ ubi lavender na oge ntoju ị nwere ike iche ihe kpatara ya.
La Vansole bụ mpaghara nwere ọtụtụ ubi lavender n'elu ugwu dị nro. Ọ bụ otu awa n'ebe ugwu nke Aix-en-Provence na mmadụ nwere ike ịnya ụgbọ ala site n'ịgbaso ụzọ lavender n'akụkụ abụọ nke okporo ụzọ ahụ. Ọzọkwa onye nwere ike kwụsị na-eje ije n'etiti ha inyocha a bit. Ugbo lavender kacha ewu ewu na mpaghara ahụ bụ Lavender Angelvin. Enwere ụlọ ahịa mara mma ebe a ebe ị nwere ike ịzụta ihe ncheta, mmanụ dị mkpa, senti, ncha na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. All lavender, ndammana.
Na-achịkọta ntakịrị, Ka ọ na-erule ngwụsị June, ọtụtụ ubi lavender nke Provence na-eto eto. Luberon bụ ebe kacha ewu ewu na nke mbụ mana Vansole na-eso ya. Lavender kachasị mma bụ nke na-eto eto na elu elu ma na-agba agba, ya mere ntakịrị oge.
Oge mbido Julaị bụ oge kacha mma ileta ubi lavender niile dị na mpaghara ahụ, ma ọ bụrụ na ị bịarutere tupu ezumike ụlọ akwụkwọ ka mma n'ihi na mmadụ dị ole na ole. Site na etiti July na Vansole nke owuwe ihe ubi lavenderMana na Upper Luberon na na Château du Bois owuwe ihe ubi na-amalite na Julaị 15.
N'akụkụ ala nke Luberon, gburugburu Lourmarin, na ubi lavender nke Valensole na ndị dị gburugburu Sisteron, ha nwere owuwe ihe ubi ha na njedebe nke Julaị, gburugburu 25th. N'August, ọ nwere ike ọ gaghị adị oke mmaYabụ ị ga-aga ozugbo na ubi lavender dị na Sault ma ọ bụ ndị dị gburugburu Banon ka ha na-etokarị ruo August 10.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Francia » Lavender ubi na France